म्यान अफ दि म्याच को हो कांग्रेसमा ? « Image Khabar
म्यान अफ दि म्याच को हो कांग्रेसमा ?
९ पुष २०७८, शुक्रबार १६:१४
काठमाडौं । हाइटेक युगमा कांग्रेसले महाधिवेशनमा हिलटेक चुनाव गरेर आफूलाई प्रविधि मैत्री बनाउन सकेन । जसको कारण १३४ जना प्रतिनिधि चुन्न मङसिर २७ गते निर्वाचन गरेको कांग्रेस पौष ८ गते सबै परिणाम घोषणा गरेर बल्ल चुनावी ह्यांगबाट बिस्तारै बाहिर आउँदैछ ।
७५ वर्षीय वृद्ध कांगेस नेता शेरबहादुर देउवा पुनः अघिल्लो पटक भन्दा शक्तिशाली दुई तिहाइ आफ्नो गुटका प्रतिनिधि सहित सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । यसको अर्थ हो देउवा स्वयं पनि कांग्रेस चुनावको म्यान अफ दि इलेक्शन हुन् । कांग्रेसको इतिहासका प्रभावशाली पात्र हुन् । कांग्रेस महाधिवेशनमा म्यान अफ दि म्याच को हो ? भन्ने सवाल प्रमुख रूपमा उठेको छ ।
हुन त हरेक विजेता आफ्ना लागि म्यान अफ दि म्याच हुन् । विभिन्न परिस्थिति, असहजता र प्रतिकूलताका बावजूद पनि आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा वडादेखि चुनिदै, प्रतिष्पर्धाको स्वस्थ अस्वस्थ सबै खाले दौडमा जिल्लाहुँदै केन्द्रसम्म आएर केन्द्रको अनेकन गुट उपगुटमा पर्दै चेपिंदै, छेकिदै, छलिदै, भाग लिंदै केन्द्रमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नु आफैमा चानचुने उपलब्धी होइन ?
कांग्रेस केन्द्रको नेता बन्नु उसै पनि प्रत्येक व्यक्तिको लागि महासंग्राम जित्नु बराबर हो तसर्थ हरेक विजेता उसको हकमा म्यान अफ दि इलेक्शन हो ! यद्यपि सबै भन्दा बढी प्रतिनिधिको मत विश्वास आर्जन गरेर चुनिने नेतालाई म्यान अफ दि म्याच ( इलेक्शन ) भनिन्छ ।
निर्विरोध निर्वाचित हुनु पनि एक प्रकारले म्यान अफ दि म्याच हुनु नै हो । तल्लो तहदेखि स्थानीय पालिका हुँदै, जिल्ला र प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म झाँगिएको गुट–उपगुटबाट बचेर निर्विरोध चुनिन पाउनु पनि सानो भाग्य र अवसर होइन । यसर्थ निर्विरोध कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुन् पाउने प्रदेश नं दुईका दुई भाग्यमानी रमेश रिजाल र आनन्द प्रसाद ढुंगाना म्यान अफ दि म्याच हुन् ।
खेलमा जस्तो म्यान अफ दि म्याच राजनीतिमा सहज रुपमा छान्न र देख्न मुश्किल हुन्छ । राजनीतिमा बिभिन्न प्राविधिक, नैतिक, राजनीतिक र अन्य विविधता रहन्छ । त्यसैले सबैभन्दा बढी मत ल्याउने म्यान अफ दि म्याच मुक्ता देवी यादवलाई घोषणा गर्नु पर्ने हुन्छ । यादवले शशांक कोइरालालाई १२४ मतान्तरमा पछाडि छोडेर आफूलाई सर्वाधिक मत ल्याउने नेता ३९६० मतको हकदार बनाइन् ।
तर उनलाई यो उपाधि दिन कोही मन्जुर छैनन्, कारण उनको राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेको प्रभाव वर्चस्व र चर्चा र निर्णायक क्षमता आजसम्म कसैले देखेको छैन । उनलाई समग्र कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिले समेत चिनेका छैनन् । तर संयोग उनका लागि सबैभन्दा बढी मत कांग्रेस कार्यकर्ताले खन्याए । जसले गर्दा मतमा पहिलो देखिएका र सबैले निर्विवाद म्यान अफ दि म्याच स्वीकार गरेका डाक्टर शशांक कोइराला पछि परे । यद्यपि डा. शशांक क्षमता, बुद्धि र विचारले यतिधेरै शक्तिशाली भएका होइनन् ।
१३ औं महाधिवेशनमा जुन अपेक्षा र उदेश्यले कांग्रेस कार्यकर्ताले महामन्त्रीको रुपमा कोइरालालाई रोजे पनि उनले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेनन् । महाधिवेशनमा कतै र कसैका लागि नखुलेका र सबै गुट र मोर्चाले आफ्नो भोट बढाउन र मतदातालाई आकर्षण गर्न केन्द्रीय सदस्यमा नाम राखेका कोइरालाले जति मत प्राप्त गरे त्यो प्राबिधिक मत हो ।
कांग्रेसजनहरुले डाक्टर शशांक कोइरालाको क्षमता, शैली र बानीलाई भोट गरेका किमार्थ होइनन् । उनमा बीपीको अनुहारको प्रतिछाँया देखेर भावनात्मक भएर बीपीप्रतिको श्रद्धा र विश्वासको आत्ध्यात्मिक समर्थन र समर्पण प्रकट गरेका हुन् । भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट नियाल्दा त्यो फगत अन्धविश्वास हो । केवल आत्म प्रवन्चना हो । यद्यपि , कांग्रेसजनको अभ्यन्तरणको अभ्यर्चनामा मलाई भन्नु केही छैन । व्यक्तिको आस्था र विश्वास उसको अधिकार र स्वतन्त्रता हो । प्रश्न विवेक सहितको बौद्धिक समर्थन कि ? विशुद्ध अभ्यन्तरणको अभ्यर्चना ? आगामी दिनमा कांग्रेसहरू समीक्षात्मक हुनु जरुरी छ ।
देशभर जम्मा १६ प्रतिशतले विश्वास गरेका शेखर कोइरालाको टिमबाट महामन्त्रीमा भिडेका गगन सर्वाधिक मत ३०२३ साथ तृतीय स्थानमा रहे पनि उनको जितले जवर्जस्त युवा पुस्ताको नेतृत्वमा रूची र आकर्षण थपेको छ । गुटको कारण गगनलाई लोकप्रिय मत प्राप्त हुन नसकेपनि उनको विजयमा सुनिश्चित देखिन्थे कांग्रेसजन । गगनको लोकप्रियता पनि आफैमा एउटा प्रयोग र म्यान अफ दि म्याच हुनुको संकेत हो ।
डा. प्रकाश शरण महत र डा. मिनेन्द्र रिजाल कांग्रेसका चर्चित र बौद्धिक हस्तीहरू हुन् । यी दुई डाक्टरलाई चुनौती दिनु नै महाभारत भएको बेला यिनलाई पराजित गरेर गगन र विश्वप्रकाश जस्ता युवा हस्ती निर्वाचित हुनमा कांग्रेसजनले देखाएको सुझबुझलाई चित्रित गर्छ भने गणेश लामालाई जिताउनु र कांग्रेसमा लामो त्याग गरेका दुःख पाएका क्षमतावान कांग्रेसलाई बिर्सेको देख्दा कांग्रेसहरूको विवेकमा धमिरा लागेको अर्थ पनि भेट्न सकिन्छ ।
तथापि विश्व प्रकाश जस्ता प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई महामन्त्रीमा जिताउने गरि मत दिनु झण्डै आठौं आश्चर्य नै मान्नुपर्छ । कुल खसेको मत ४६८६ मा जम्मा ३७१ मत पाउने प्रकाशमानको टिमबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार बनेर उनको भन्दा १६१३ मत बढी अर्थात १९८४ मत ल्याएर विजय प्राप्त गरे । देउवाले पनि महामन्त्रीमा पत्याएनन्, सिटौलाको खेदाइमा परे, शेखरको टिममा पर्न पनि मिनेन्द्र हुलिदिएर शशांकले विश्वलाई लखेटे । तर विश्वाश अनुरुप दाइ शेखरलाई पनि शशांकले सघाएनन् पनि, तर विश्वलाई शेखरको टिमबाट आउट गर्न सफल भए यसरी सबैतिरबाट खेदाइमा परेका विश्वप्रकाश केहीसिप नलागेपछि समुन्द्रमा त्यान्द्रो सहारा भने झैँ आखिरीमा प्रकाशमान सिंहको टिममा बसेर लड्ने निर्णय गरे ।
टिम त्यान्द्रो भए पनि विश्व प्रकाशको आत्मविश्वास र शैलीले चुनाव जित्छु कांग्रेस कार्यकर्ताले न्याय गर्छन भन्ने अटल धारणा र सकारात्मक सोचको कारण स्वतन्त्रको शैलीमा कांग्रेस महामन्त्रीमा गगन थापासँगै विजय प्राप्त गरे । कांग्रेस भित्रको गुट उपगुट र मोर्चाबन्दीमा निरिह जस्तै बनेका विश्व आफ्नो शैली र विगत देखिको सालिनता धैर्य र कुटनीतिक क्षमताको कारण कार्यकर्ता माझ लोकप्रिय र देशमा नै ख्यातिप्राप्त थिए । जसको कारण उनले एक्लै लडे नि चुनाव जित्ने ल्याकत राख्थे ।
आखिर चुनाव हो यसै भन्न सकिने स्थिति हुँदैनथ्यो र मत थोरै भए नि गुटको थपिदा जित्न सहज हुनेछ भन्ने अनुमान गरेर उनी प्रकाशमानको गुटबाट चुनाव लड्ने बाध्यकारी अवस्थामा पुगे । प्रकाशमान र विश्व दुवैले आ–आफ्नो राष्ट्रिय हैसियत प्रदर्शन गरे । विश्वले झण्डै झण्डै एक्लै जस्तो लडेर पनि जुन मत र विश्वास पाए त्यो म्यान अफ दि म्याच नै हो ।
नैतिक व्यवहारिक र अर्थगत गुणस्तरीय जितको रुपमा विश्वको जितलाई लिन सकिन्छ । कांग्रेसमा १४आंै अधिवेशनको म्यान अफ दि म्याच को हो ? सर्वाधिक मत ल्याउने मुक्ता देवी यादव, दोश्रो मत ल्याउने शशांक कोइराला, तेश्रो मत ल्याउने गगन थापा वा एक्लै उठेर् जित्ने विश्वप्रकाश ? यो गम्भीर र मन्थनीय विषय छ ।
जो जहाँ जसरी जितेर आए पनि सवाल कांग्रेसको आधुनिकीकरण र सामयिक कांग्रेस बनाउने कांग्रेस रुपान्तरणको हो । मृत्यु शैयामा जाँदासम्म जनैको साँचो बोकी राख्ने नेता र नेतृत्व संस्कारको शैली र अभ्यास बनेर बसेको समाजमा रुपान्तरणलाई सहजानुभूती गरिन्न । कांग्रेसका गगन, विश्व प्रकाश र धनराजहरुलाई चुनौती र अवसरको मौका आएको छ । यसलाई कतातिर दौडाउँने क्षमता राख्छन्, त्यसैमा निर्धारण हुन्छ म्यान अफ दि म्याच को हुने भनेर ?
प्रश्न कांग्रेसले आगमी चुनावमा सरकार बन्ने गरि जित्नु मात्रै होइन देश कसरी हाँक्छ र देशलाई कस्तो बनाउँछ भन्ने हो । कांग्रेस बनाउन सकेनन् र देश बनाउन सकेनन् त्यसको स्पष्ट खाका कोर्न सकेनन् भने जसले जसरी जिते पनि त्यसको अर्थ र महत्व हुन्न । अर्थपूर्ण कांग्रेस प्रगतिशील जनमुखी कांग्रेस आजको देशको खाँचो हो ।
आजको मत प्राविधिक लोकप्रियता हो । सर्वकालिक र दीर्घकालीन लोकप्रियता नै म्यान अफ दि म्याच हुने आधार र प्रमाणहरू हुन् । मत क्षणिक हुन सक्छ मनमा बस्नेगरी काम गर्न कांग्रेस नेतृत्वलाई शुभकामना !
काँग्रेसमहाधिवेशनम्यान अफ दि म्याच